Ashley Cole na -ekwu maka mmegharị Derby County ka ya na Frank Lampard dịrịghachi | 1xbet
Ashley Cole na Derby County na -enwe mkparịta ụka na ebumnuche isonye na klọb Championship ruo na njedebe nke oge. A ghọtara onye dị afọ 38 onye bụbu onye mba England ka ọ na-atụle ma ọ ga-abịanye aka na nkwekọrịta obere oge maka Derby na mmegharị nke ga-ahụ ka ya na Frank Lampard, onye otu egwuregwu Chelsea mbụ ya, ma ọ bụ kpọọ oge maka onye ama ama. Window mbufe n’ọnwa Jenụwarị 2019 – nkwekọrịta ọ bụla sitere na klọb ise kachasị elu nke Europe Gụkwuo
Derby nwere olile anya na Cole, onye bụ onye nweere onwe ya mgbe ọ hapụsịrị LA Galaxy na Nọvemba, ga -ekwenye ịbịanye aka na ọnụnọ Lampard dịka onye njikwa ihe buru ibu. Cole na Lampard bụ ezigbo enyi n’oge egwuregwu ha ma nọrọkwa nso.Lampard kwetara ọnwa ole na ole gara aga na ịbịanye aka na Cole bụ ihe ga -ekwe omume wee tụọ aro ka ọ kpọọ onye ọkpụkpọ egwu. kwenyesiri ike na onye agbachitere, onye ọ kọwara dị ka “onye aka ekpe kacha mma nke ọgbọ ya”, ga-enwe ike igwu egwu na Championship.Ndị nọ nso Cole na -ekwu na ohere igwu egwu n’akụkụ ọtụtụ ndị na -eto eto nwere nkà ga -amasị ya, ọkachasị na Derby na -akwalite nkwalite n’okpuru Lampard, ma na -ekwusi ike na ego agaghị arụ ọrụ ọ bụla ma ọ kpebiri ịkwaga Pride Park.
Lampard na Cole na -alaghachi azụ ogologo oge, ebe ha nọrọla afọ asatọ na Chelsea, site na 2006 ruo 2014, n’oge ha meriri aha Premier League, iko FA anọ na Champions League. Cole, onye ya na Arsenal meriri iko Premier League abụọ, na -egwu England ugboro 107. Ọ hapụrụ Chelsea na 2014 ịbanye Rome, ebe ọ nọrọ oge abụọ tupu ọ banye LA Galaxy. Fiver: debanye aha wee nweta email bọọlụ anyị kwa ụbọchị.